ပိုလန္ကိုခ်ေကြၽးျခင္း ( ယူကရိမ္းဟာ ၿခံစည္း႐ိုးမီးေလာက္သာျဖစ္ၿပီး ပိုလန္နဲ႔ျဖစ္ရင္ ျပႆဒ္အေျခမွာ ေလာင္တဲ့မီးမ်ိဳး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္၊ )
ပိုလန်ကိုချကျွေးခြင်း ( ယူကရိမ်းဟာ ခြံစည်းရိုးမီးလောက်သာဖြစ်ပြီး ပိုလန်နဲ့ဖြစ်ရင် ပြဿဒ်အခြေမှာ လောင်တဲ့မီးမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်၊ )
MIG -29 (၁၂) စီးကို ပိုလန်ဖက်ကနေ ယူကရိမ်းကို ကူပေးဖို့ အမေရိကန်က အချက်ပြတယ်၊ F-16 (၁၂) စီးကိုပါ အမေရိကန်က အပိုဆောင်းထဲ့ပေးဦးမယ်ဆိုပဲ၊ ယူကရိမ်းကိုစစ်ရေးအကူပေးရင် ရန်သူပါလို့ ရုရှားဖက်ကအပြတ်ပြောထားတယ်၊ သိသိကြီးနဲ့ ကူတာဆိုရင်တော့ ပိုလန်ကို ချကျွေးပြီး စစ်ဘောင်ချဲ့တာလား ? ပိုလန်ကို အကြောင်းပြုပြီး နေတိုးက ရုရှားနဲ့ အားစမ်းချင်တာလား ? အမေရိကန်နဲ့ ပိုလန်တို့ရဲ့
အခုလုပ်ရပ်ဟာ ယူကရိမ်းစစ်ထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်၊ ယူကရိမ်းစစ်က ကန့်သတ်စစ်ပါ၊ ပိုလန်နဲ့ ရုရှားထိတ်တိုက်တွေ့ကြရင် ကန့်သတ်မဲ့စစ်အဖြစ် တမဟုတ်ချင်း ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်၊ ………. ပူတင်ခေါင်းကိုက်ဖို့ ဖြစ်လာပြီ ပိုလန်ရဲ့အကူပေးရေးကိစ္စ ဟာ ပူတင့်အတွက် တကယ့် စမ်းသပ်ချက်တခု ဖြစ်လာတယ်၊ ယူကရိမ်းစစ် လက်စ မသပ်သေးခင်မှာ ပိုလန်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင် ရုရှားဟာ စစ်မျက်နှာ (၂) ခုကို
ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ ရပ်မသွားသေးဘူး၊ ဂျာမဏီ၊ ချက်၊ စလိုဗေးကီးယားတို့ မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပြီး စစ်ဖြားတွန်းပို့သလိုခံရမယ်၊ နေတိုးအဖွဲ့ဝင် ဂျာမဏီကိုပါ လုပ်ကြံလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ရဲ့ ခါးသီးမှုကို အကြောင်းပြုပြီး၊ စစ်ရန်လိုမှုအင်မတန် နည်းနေတဲ့ ဂျာမဏီကို ညစ်ပါတ်တဲ့နည်းနဲ့ စစ်ဖြားအပူဟပ်ပေးတဲ့ ဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်၊ …………… ကမ္ဘာစစ်ကို ဖွင့်ဆိုချက် အမျိုးမျိုးပေးထားတဲ့အထဲက
တခုသောဖွင့်ဆိုချက်က ” (၆) နိုင်ငံအကြားစစ်ဖြစ်ရင် ကမ္ဘာစစ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ ” …………… ယူကရိမ်းစစ်တခုထဲကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို အများကြီး မထိခိုက်လှပါဘူး၊ အမေရိကန်ဦးဆောင်လိုက်တဲ့ Sanction ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်သွားတာကို သတိပြုကြစေလိုတယ်၊ မတော်တဆ စစ်ထဲပိုလန်ပါလာရင် ပိုကျယ်ပြန့်လာမဲ့အပြင် တတိယကမ္ဘာစစ်နှုတ်ခမ်းပေါ် တကယ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်၊
ယူကရိမ်းဟာ ခြံစည်းရိုးမီးလောက်သာဖြစ်ပြီး ပိုလန်နဲ့ဖြစ်ရင် ပြဿဒ်အခြေမှာ လောင်တဲ့မီးမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်၊ ………… ရွှေမြန်မာတို့ရေ ထိုင်ကြည့်မနေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာလုပ်ကြတော့ ရီးစားက ကားပေါ်ရောက်နေပြီ ကားသော့ ဘယိရောက်နေမှန်းမသိဘူး လုပ်မနေနဲ့ဦး။
crd-ဗဒင် (7.3.22 )
ပိုလနျကိုခကြြှေးခွငျး ( ယူကရိမျးဟာ ခွံစညျးရိုးမီးလောကျသာဖွစျပွီး ပိုလနျနဲ့ဖွစျရငျ ပွဿဒျအခွမှော လောငျတဲ့မီးမြိုး ဖွစျလာပါလိမျ့မယျ၊ )
MIG -29 (၁၂) စီးကို ပိုလနျဖကျကနေ ယူကရိမျးကို ကူပေးဖို့ အမရေိကနျက အခကြျပွတယျ၊ F-16 (၁၂) စီးကိုပါ အမရေိကနျက အပိုဆောငျးထဲ့ပေးဦးမယျဆိုပဲ၊ ယူကရိမျးကိုစစျရေးအကူပေးရငျ ရနျသူပါလို့ ရုရှားဖကျကအပွတျပွောထားတယျ၊ သိသိကွီးနဲ့ ကူတာဆိုရငျတော့ ပိုလနျကို ခကြြှေးပွီး စစျဘောငျခြဲ့တာလား ? ပိုလနျကို အကွောငျးပွုပွီး နတေိုးက ရုရှားနဲ့ အားစမျးခငြျတာလား ? အမရေိကနျနဲ့ ပိုလနျတို့ရဲ့
အခုလုပျရပျဟာ ယူကရိမျးစစျထကျ ပိုပွီး အန်တရာယျကွီးပါတယျ၊ ယူကရိမျးစစျက ကနျ့သတျစစျပါ၊ ပိုလနျနဲ့ ရုရှားထိတျတိုကျတှေ့ကွရငျ ကနျ့သတျမဲ့စစျအဖွစျ တမဟုတျခငြျး ရောကျသှားနိုငျပါတယျ၊ ………. ပူတငျခေါငျးကိုကျဖို့ ဖွစျလာပွီ ပိုလနျရဲ့အကူပေးရေးကိစ်စ ဟာ ပူတငျ့အတှကျ တကယျ့ စမျးသပျခကြျတခု ဖွစျလာတယျ၊ ယူကရိမျးစစျ လကျစ မသပျသေးခငျမှာ ပိုလနျနဲ့ထိတျတိုကျတှေ့ရငျ ရုရှားဟာ စစျမကြျနှာ (၂) ခုကို
ရငျဆိုငျရမယျ၊ ရပျမသှားသေးဘူး၊ ဂြာမဏီ၊ ခကြျ၊ စလိုဗေးကီးယားတို့ မတညျမငွိမျဖွစျလာပွီး စစျဖွားတှနျးပို့သလိုခံရမယျ၊ နတေိုးအဖှဲ့ဝငျ ဂြာမဏီကိုပါ လုပျကွံလိုကျတဲ့သဘောဖွစျလာတယျ၊ ဒုတိယ ကမ်ဘာစစျရဲ့ ခါးသီးမှုကို အကွောငျးပွုပွီး၊ စစျရနျလိုမှုအငျမတနျ နညျးနတေဲ့ ဂြာမဏီကို ညစျပါတျတဲ့နညျးနဲ့ စစျဖွားအပူဟပျပေးတဲ့ ဗြူဟာဖွစျပါတယျ၊ …………… ကမ်ဘာစစျကို ဖှငျ့ဆိုခကြျ အမြိုးမြိုးပေးထားတဲ့အထဲက
တခုသောဖှငျ့ဆိုခကြျက ” (၆) နိုငျငံအကွားစစျဖွစျရငျ ကမ်ဘာစစျလို့ သတျမှတျပါတယျတဲ့ ” …………… ယူကရိမျးစစျတခုထဲကွောငျ့ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးကို အမြားကွီး မထိခိုကျလှပါဘူး၊ အမရေိကနျဦးဆောငျလိုကျတဲ့ Sanction ကွောငျ့ ကယြျကယြျပွနျ့ပွနျ့ ဖွစျသှားတာကို သတိပွုကွစလေိုတယျ၊ မတောျတဆ စစျထဲပိုလနျပါလာရငျ ပိုကယြျပွနျ့လာမဲ့အပွငျ တတိယကမ်ဘာစစျနှုတျခမျးပေါျ တကယျရောကျသှားပါလိမျ့မယျ၊
ယူကရိမျးဟာ ခွံစညျးရိုးမီးလောကျသာဖွစျပွီး ပိုလနျနဲ့ဖွစျရငျ ပွဿဒျအခွမှော လောငျတဲ့မီးမြိုး ဖွစျလာပါလိမျ့မယျ၊ ………… ရှှမွေနျမာတို့ရေ ထိုငျကွညျ့မနနေဲ့ လုပျစရာရှိတာလုပျကွတော့ ရီးစားက ကားပေါျရောကျနပွေီ ကားသော့ ဘယိရောကျနမှေနျးမသိဘူး လုပျမနနေဲ့ဦး။
crd-ဗဒငျ (7.3.22 )